Ahoana ny fomba hanendrena ny hitsin-dàlana fitendry hanakodia amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Ahoana ny fomba hanendrena ny hitsin-dàlana fitendry mba hitsimbadika amin'ny Adobe Photoshop
Rehefa miasa amina sary iray isika ary mandany fotoana milentika ao anatiny dia atahorana tsy hahita ireo lesoka mety hataontsika isika ary hanjary hamoy ny asantsika mandritra ny ora maro nefa tsy tonga mahazoa ny valiny tadiavinay.
Tetika tena ilaina hahalalana hoe inona no tsy mety amin'ny sarinay na hijerena fotsiny raha toa ka marina ny firafitra ary mahita lesoka mety hitranga dia ny mamadibadika ny sary mifamadika.
Izany no izy, satria rehefa mandinika fotoana maharitra ny famolavolana izay ataontsika isika, dia zatra izany ny masontsika ary tsy miraharaha izay azo antoka. lesoka izay hitantsika eo no ho eo rehefa mahita ny sary voalohany isika na aseho antsika ho vaovao izy io, izay no mitranga rehefa hita taratra izany (flip horizontal).
Raha hampiasa haino aman-jery nentim-paharazana isika hamoronana ny asantsika, ny fomba iray hijerena ireo lesoka mety hitranga dia ny fametrahana ny sary eo alohan'ny fitaratra, izay mitovy amin'ny safidy marindrano miolakolaka amin'ny Adobe Photoshop.
Ampirisihina mafy toy ny andao hiroso amin'ny asantsika, andao handray ity hetsika ity tsindraindray mamantatra ireo lesoka mety nipoitra tao amin'ilay firafitra ary noho izany aza sorohana ny fitarihana azy ireo amin'ny dingana mandroso indrindra amin'ny asa.
Raha mbola ny sarinay miasa tsara amin'ny lafiny roa dia marinaNa izany aza, raha mahita zavatra tsy mety isika rehefa mitsivalana marindrano dia satria lesoka ihany koa io amin'ny fahitana ampiasaintsika io.
Ahoana ny fomba hanendrena hitsin-dàlana fitendry amin'ny safidy mitsivalana
Para mitsitsia fotoana amin'ny fanaovana an'io, tena ilaina ny manome hitsin-dàlana fitendry amin'ny tsindry mitsivalana, satria ny Adobe Photoshop dia tsy manome azy io ho default.
Ho an'ity dia handeha isika sakafo-> fanontana->hitsin-dàlana fitendry
Tsindrio ny kiheba fanovana hanokatra ny atiny. Mitadiava marindrano ny safidy.
eyelash fanontana ->mitsivalana atsivalana -> tsindrio ny boaty ary izahay manendry ny hitsin-dalana izay tadiavinay raha mbola tsy tratran'ny hitsin-dàlana hafa izy.
Ao amin'ny ohatra dia nanendry ny hitsin-dàlana ctrl + ñ aho.
Zava-dehibe ny fahafantarana fa ny sosona izay notendrenay ihany no ampiharina. Raha izay tadiavintsika dia Atsimbadiho ny sary feno fa tsy maintsy safidintsika ny sosona rehetra mandrafitra azy.
Zava-dehibe koa ny fahalalana fa raha teo amin'ireo sosona nofidintsika dia nisy voafantina tsy hita maso sosona, ny fandidiana dia tsy ho tanterahina, tsy maintsy hamafana izany isika raha hamafa azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Ahoana ny fomba hanendrena ny hitsin-dàlana fitendry mba hitsimbadika amin'ny Adobe Photoshop